Mootummaan Indiyaa mirga addaa ofiin of-bulchuu Kutaa Bulchiinsa Kaashimiir haquu labse - NuuralHudaa
Mootummaan Indiyaa mirga addaa ofiin of-bulchuu Kutaa Bulchiinsa Kaashimiir haquu labse
Kutaan Kaashimii Indiyaa jalatti argamtu bara 1954 irraa jalqabee heera biyyattii keewwata 370 jalatti mirgi addaa ofiin ofbulchuu kennameefii kan ture yoo tahu, mootummaan biyyattii guyyaa har’aa keewwata waggaa 70 ol Kaashimiir ittiin bulaa turte kana haquu labse. Ministeerri biyya keessaa Indiyaa Amit Shah Paarlaamaa biyyattiitiif akka ibsetti, Prezdaantichi labsii kana mallatteessuun guyyaa har’aa irraa jalqabee kutaan Kaashimiir guutumaan guututti mootummaa Indiyaa jalatti kan gale tahuu beeksise.
Mootummaan Indiyaa akka jedhetti, heerri mirga addaa Kaashimiir waggaa dheeraaf hojii irra ture, lammiilee Indiyaa kanneen biroo bulchiinsa Kaashimiir keessatti qabeenya horachuu fi mootummaa naannichaa keessatti hujii bulchiinsaa irratti akka hin hirmaanne kan dhoorku ture.
Lammiileen Kaashimiir labsiin mootummaa indiyaa kun ummata Kaashimiir kan amantaa muslimaa hordofu dhiibuun, warra amantaa hinduu naannicha keessa qubachiisuuf tarkaanfii fudhatame jechuun hadheeffatanii mormaa jiran. Murtiin mootummaan Indiyaa finxaalessitoota amantaa hinduu hordofaniin deeggaramu amma dabarse kun, qabsoo ummata Kaashimiir daranuu kan finiinsu tahuu lammiileen Kaashimiir ibsaa jiran. Paartiin mormituu Indiyaa Congress Party jedhamus labsii hamaa jechuun qeeqe.
Mootummaan Indiyaa mormii ummata Kaashimiir kana humnaan cabsuudhaaf, humna waraanaa dabalataa gara naannichaa kan galchaa jiru tahuus odeeyfannoon ni addeessa.
Paakistaan bara 1947 Indiyaa irraa eega fottoqxee booda, naannoon Kaashimiir humnaan bakka lamatti kan qoodame yoo tahu, ummanni Kaashimiir gama lamaan jiru, Paakistaan waliin walitti makamuu yookaan ammoo biyya Kaashimiir walaba taate hundeefachuuf kan falmataa jiru tahuu ni beekama.
July 6, 2022 sa;aa 7:40 am Update tahe